BWC010 - ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ င်များ ၀ တ်ဆင်သည့်ကင်မရာအသေးစား၊ ၁၂၉၆p၊ ၁၇၀ ဒီဂရီ၊ ၁၂ နာရီ၊ ညအမြင်အာရုံ | OMG Solutions
BWC010 ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်စုံကင်မရာ 32MP HD 1296P ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ DVR ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်လုံခြုံရေးကင်မရာသည်အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်
BWC010 သည်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အထူးတည်ဆောက်ထားသောကိုယ်ထည်သည်အလွန်ခေတ်မီသောကိုယ်ခန္ဓာဝတ်ဆင်ထားသောကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စူပါကျယ်သော ၁၇၀ ဒီဂရီ FOV ပါရှိသည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှန်ဘီလူးနှင့် 170GB သိုလှောင်မှုတို့ဖြင့်နာရီပေါင်းများစွာရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ခလုတ်တစ်ချက်တည်းနှိပ်ရုံဖြင့်ကင်မရာပိတ်ထားသည့်တိုင်အောင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ BWC010 4000 ကျော်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်အဘို့အ built 9mAh မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဘက်ထရီရှိသည်။ built-in LCD သည်လယ်ကွင်းရှိဗီဒီယိုများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အသံဖမ်းချက်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတွင်မှတ်တမ်းတင်မှုစတင် / ရပ်တန့်ရန်အတည်ပြုသောအညွှန်း ၂ ခု (LED မီးနှင့်အသံ) ရှိပြီး၎င်းကိုမတားဆီးနိုင်သောအမှတ်အသားများထည့်ထားသည်။
1. Ambarella A7LA50 chipset ကို 170 ဒီဂရီအကျယ်ထောင့် 128GB max ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, 12 + နာရီအချိန်ကြာမြင့်စွာမှတ်တမ်းတင်
video resolution: 2304: 1296fps, 30fps, 1920 မှာ 1080fps မှာ 30fps / 1920 * 1080 မှာ 30fps / 1280 * 720 မှာ 60fps / 1280 * 720 မှာ 30 * 848 မှာ 480 * 60 မှာ 16 * 9
ဓာတ်ပုံ resolution ကို: 32M (7552×4248 16:9) (30M/23M/20M/18.5M16M/4M)
3. ညဥ့်ရူပါရုံကို: ကို manual / အော်တိုမှာ IR switch ကို, 10 မီတာမျက်နှာကိုမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
4. ရေစိုခံ: ရေစိုခံ IP67,
5. Shockproof:3မီတာအခမဲ့တစ်စက်
6. မှန်ဘီလူးထောင့်: 170 wide-angle °
7. display: 2.0 လက်မအရွယ် 4:3FHD color display ပါ
8. ဘက်ထရီ: 3.7V 4000mAh
9. ဘက်ထရီသက်တမ်း: 720p: 11H, 1080p: 10H, standby လုပ်ထား: 12H
10 ။ မှတ်ဉာဏ်ထည့်သွင်းပါ:စံချိန်စံညွှန်းများ: 32GB (optional ကို: 64GB / 128GB)
11 ။ ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Windows XP / Windows ကို7/ Windows ကို 8 / Windows ကို 10
12 ။ ပြင်းစွာတိုက်: 2/3/5/10/15/20 shooting pictures
13 ။ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား: 77mm * 56mm * 31mm
14 ။ ကိုယ်အလေးချိန်: 143g
ဗီဒီယိုကို Input: Body Built-in ကင်မရာ res resolution 2560X1080 1296P (Ultra HD)၊ ပြင်ပကင်မရာ resolution 848 × 480 (VGA) (optional)
display: 2.0 လက်မ 16:9TFT LCD ကို 960 * 240
မှန်ဘီလူး: built-in Len: 1296P Ultra HD၊
ပြင်ပ Len: VGA ကျယ်ပြန့်သောထောင့် 90degree
ထောင့်မြင်ကွင်း 170 °
ရုပ်ပုံ resolution: 32 အမတ်
အခြေအနေအညွှန်းကိန်း: အသံ၊ အမြင်၊ တုန်ခါမှုနှင့်မှတ်တမ်းစတင် / ရပ်တန့်ခြင်းအတွက်သတိပေးချက်
အဆင်သင့်အနေအထားဖြင့်အချိန် - ၂၄ နာရီ (ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး)
focus အကွာအဝေး: 0.3 ~ ∞
CMOS: 1 / 2.5 "အရောင် CMOS Sensor ကို
ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား: ၁.၉ လက်မ x ၁ လက်မ x1.9” / ၅၅.၈mm၊ ၃၂.၉ မီလီမီတာ ၇၈၈mm (အရှည်×အကျယ်×အမြင့်)
Image ကိုဆုံးဖြတ်ချက်: ၃၂၀၀ သန်း pixel ကင်မရာအထိ JPG file format
ဗွီဒီယိုရလဒ် ဗီဒီယိုအမျိုးအစား: H.264 compressed အမျိုးအစား, 2560X1080 @ 30fps (1296P), 2304X1296 @ 30fps, 1920X1080 @ 30fps (1080p), 1920X1080 @ 45fps, 1280X720 @ 60fps, 1280X720 @ 30fps (720P), 848X480 @ 30fps (VGA)
audio: built-in မိုက်ခရိုဖုန်း / စပီကာ
ဘက်ထရီ: စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် lithium ဘက်ထရီ၊ 3.7V 4000mAh
ဘက်ထရီသက်တမ်း: ဗီဒီယိုဖိုင် ၃၆၆ နာရီ ၃ နာရီအားသွင်းရန်နာရီ ၅၀၀ အပြည့်ရှိသောစက်ဝိုင်း ၁ နာရီ = 500GB; 3P 1296fps 30 နာရီ = 1GB, 5P 1080fps 30hour = 1GB; 3.1P 720fps 30 နာရီ = 1GB
သိုလှောင်မှု: 32GB -18 နာရီ (HD); 64GB-36hrs (HD)၊
မှတ်တမ်းတင်သည့်အချိန် (စစ်မှန်သောစမ်းသပ်မှု): 9P (Ultra HD) တွင် 40 နာရီ 1296 မိနစ်၊ 10P (အပြည့် HD) တွင် 40 နာရီ 1080 မိနစ်, 12P (HD) တွင် 10 နာရီ 720 မိနစ်, 14P (VGA) တွင် 480 နာရီ
သိုလှောင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်: 32GB (optional ကို: 64GB / 128GB)
မှတ်ဉာဏ်: ခန္ဓာကိုယ်မှတ်ဥာဏ်: 32M
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေး: 2.4G / ကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုသော့ချက်စစ်ဆင်ရေး
PTT (optional): Motorala GP328, EX600 သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်
ဂျီပီအက်စ် (ရွေးချယ်နိုင်သည်): တည်ဆောက်ထားသည်
ရေစာ အရာရှိ ID နှင့်ရက်စွဲ / အချိန်တံဆိပ်ကိုဗီဒီယိုတွင်ထည့်သွင်း
Exposure Mode: အော်တို Exposure
IR ညဥ့်ရူပါရုံ: ပါ ၀ င်သည့် ၈ ပါဝါအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းရောင်ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအထောက်အပံ့သည် ၈ မီတာ (Automatically IR Night Vision) မျက်နှာများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်
Shutter / Shutter Speed: အီလက်ထရောနစ် Shutter / 1 / 2-1 / 2000s
USB မှတ် Interface: Mini USB ဆက်သွယ်မှု / USB 2.0 / POGO ဆိပ်ကမ်း
operating အပူချိန် / စိုထိုင်းဆ: -30 မှ 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် / <၉၀%
operating current: ဖွင့်လှစ်ဖို့အကြောင်း 270mA, ဗီဒီယို 370mA, 230mA အကြောင်းကို screensaver အကြောင်း, 420mA မှာ IR ၏ပါဝါကို
BWC010 - ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ၊ ၁၂၉၆p၊ ၁၇၀ ဒီဂရီ၊ ၁၂ နာရီ၊ ညအမြင်အာရုံ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: မေလ 12th, 2020 by admin ရဲ့
4139 စုစုပေါင်း Views စာ 23 Views စာယနေ့တွင်
WIFI အိတ်ဆောင် Wearable Security 12MP ကင်မရာ၊ 1296P၊
BWC010-LC - ခန္ဓာကိုယ်ကင်မရာ Lock Lock